Wasiirka Aminiga Puntland oo Sheegay in la qabtay nin ka tirsan Xarakada Alshabaab – SBC
Wasiirka Aminiga Puntland oo Sheegay in la qabtay nin ka tirsan Xarakada Alshabaab
Wasiirka Amniga Puntland Gen Khaliif Ciise Mudan oo la hadlayay Warbaahinta Garoowe ayaa sheegay in ciidamada Amaanka Puntland ay gacanta ku dhigeen nin ka tirsanaa xarakada Alshabaab .
Ninkan ayuu sheegay wasiirku in lagu qabtay gudaha magalada Boosaaso xarunta gobolka Bari, laguna qabtay israsaaseyn uu hal qof ku dhintay oo maanta gelinkii hore ka dhacday gudaha magaalada Boosaaso.
Ninka Dhintay ayaa ahaa nin Rayid ah oo ku ganacsanayay wadada isku xirta Garoonka diyaaradaha Magaalada iyo Bartamaha Halka looyaqaan Gaaca halkas oo aheyd halka lagu qabtay ninkan ka tirsan Xarkaada Alshabaab.
Wasiir Khaliif Ciise Mudan ayaa intaasi ku daray in howlgalka lagu qabtay ninkan uu ahaa mid mudo ciidamadu ku guda jireen, warbixinna ku hayeen in uu ka mid ahaa dhor nin oo ka yimid Koonfurta Dalka kuwaas oo Boosaaso u yimid in ay ka geystaan falal amaan xumo waasida uu hadalka u dhigaye.
Ciidanka ayuu sheegay in ay ku daba jiraan 4 nin kale oo uu Gen Khaliif Ciise Mudan sheegay in ay la socdeen ninkan sida ay warbixinta ku heleen, ninka la qabtayna uu lug ka dhaawacanyahay dhaawacaas oo ka dhashay howlka lagu qabanayay isaga.
Dhinaca kale Wasiirka Amaanka Puntland ayaa u diray tacsi Eheladii uu ka geeriyooday Ninkii rayidka ahaa ee ku dhintay rasaastii dhacday markii lagu guda jiray howlgalka.